Dr. Tint Swe – Page3– Healthy Life Journal
Posts By Dr. Tint Swe
နားတစ်ဖက် မကြားရတော့လို့ပါ (Hearing problem)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Q. သမီးက အသက် ၂၄ နှစ်ပါ။ နားတစ်ဖက်မကြားရတော့လို့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အလုပ်မှာ တနေ့လုံး အကောင်းပါ။ ညကျတာ့ ရင်ဘက်အောင့်တယ်ဆိုပြီး အိမ်ပြန်ပါတယ်။ မနက်လည်းထရော ဘယ်လိုမှ ထလို့...
သွေးမဝခြင်းရောဂါ (Venous insufficiency)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Chronic venous insufficiency or CVI ဆိုတာ နာတာရှည် သွေးပြန်ကြောက သွေးမလုံလောက်တာကို ခေါ်ပါတယ်။ အဲလိုဆိုရင် အောက်စီဂျင်မဝတာ ဖြစ်နေမယ်။ သွေးပြန်ကြောတွေ ပျက်စီးနေတာကို Impaired musculovenous pump ကြွက်သားသွေးမဝတာလို့...
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— မိန်းကလေး၊ အသက် ၂၉ အရွယ်၊ နားယားလို့ နားကြပ်(နားကလော်)မိပါတယ်။ ဂွမ်းတံ၊ ကြက်တောင်မွှေး စသည်တို့ကို သုံးမိပါတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ နားထဲမှာ နေရခက်နေပါတယ်။ နှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာ နည်းနည်းကိုက်လာသလိုဖြစ်လို့ Kemose, Alexin ဆိုတဲ (အရောင်ကျဆေးနှင့်...
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— ဆရာရှင့် သမီးမှာ ၃ လခွဲအရွယ် သမီးတစ်ဦးရှိပါတယ်။ မိခင်နို့တမျိုးတည်းကိုပဲ တိုက်ပါတယ်။ သမီးက ဒီ ၆ ရက်အတွင်းမှာ ဝမ်း ၂ ကြိမ်ပဲသွားပါတယ်။ ပထမ ၂ ရက်မှာ ၁ ကြိမ်...
မှက္ခရုနာ Thrush (Oral candidiasis)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— နို့တိုက်အရွယ် ကလေးငယ်တွေမှာ လျှာ၊ အာခေါင်၊ ပါးစောင်တွေမယ် အဖြူဖတ်တွေဖြစ်ပြီး၊ ဘေးကနီနေတယ်။ နာတယ်၊ နို့စို့ရ၊ အစာစားရ ခက်တယ်။ Moniliasis လို့လဲခေါ်တယ်။ ကလေးရဲ့လျှာကို အဝတ်သန့်သန့်လေးကို လက်ညှိုးမှာပတ်ပြီး အဖြူဖတ်တွေရှင်းပေးပါ။ Gentian Violet...
ကိုယ်အလေးချိန် မထင်မှတ်ဘဲ ဘာလို့ကျသလဲ (Causes of sudden weight loss)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— မေးခွန်းဘာသာပြန် = အသက် ၂၃ နှစ် ကျန်းမာနေတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလေးချိန် မထင်မှတ်ဘဲ ကျလာတာ ဘာလို့ပါလဲ။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်လည်း နည်းနေပါတယ်။ 1. Diabetes ဆီးချို ဆီးသွားတဲ့အကြိမ် ပိုများမယ်။ ရေငတ်မယ်။...
လည်ပင်းကျီးပေါင်းတက်နေပါတယ် (Cervical Spondylosis)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— ၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော့်အသက် ၂၄ နှစ်ပါ။ အရင်နှစ်နှစ်လောက်ကစပြီး ခေါင်းအုံးနှစ်လုံးဆင့် အိပ်ပါတယ်ဆရာ။ ညဘက်ဆို ကျောက်ရွေးပါတယ်ဆရာ။ ခေါင်းငုံ့ရပါတယ်ဗျ။ ဖုန်းတနေကုန် သုံးရပါတယ်ဆရာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးလလောက်ကစ ဇက်တွေအရမ်းညောင်းကိုက်ပြီး ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်လာပါတယ်။ မျက်လုံးလည်း...
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— အရပ်ခေါ် “ရေဖျင်း” ကို ဆေးစာနဲ့ Portal hypertension လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သွေးတိုးကိုခေါ်တဲ့ (ဟိုက်ပါတင်းရှင်း)ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါတာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဖိအားများနေတာ နောက်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ (ပိုတယ်လ်)ဆိုတာက Portal venous system (ပိုတယ်လ်)...
အင်ပြင်ထွက်ခြင်း (Allergy – Urticaria – Hives)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်စပြီး အသားအရေယားယံတဲ့ ဝေဒနာ ခံစားနေရပါတယ်။ ယားလို့ ကုတ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်း (Allergic) တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အသိမိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရဲ့ အညွှန်းအတိုင်း Lergi (Cetrizine 10mg)...
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— ကိုယ်ရောင်တာကို အမေရိကန်စာလုံးပေါင်း Edema နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်း Oedema လို့ခေါ်တယ်။ ရိုးရိုးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ Swelling ဖြစ်တယ်။ အရင်က Dropsy or Hydropsy လို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ တကိုယ်လုံးမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရေ-အရည်တွေက မလိုအပ်ဘဲ...